Fahitana razana :: Vehivavy iray hita faty tao amin’ ny farihin’i Masay • AoRaha
Fahitana razana Vehivavy iray hita faty tao amin’ ny farihin’i Masay
Vatana mangatsiakana vehivavy iray, manodidina ny telopolo taona, no hita omaly maraina, natsingevan’ny rano, tetsy amin’ny farihin’i Masay. Rah any tombana dia teo amin’io toerana nahitana azy io no nahafatesany.
Tokony ho tamin’ny enina ora maraina no nisy nahatazana tao anaty farihy io ny fatin’ilay vehivavy nitsilany. Nantsoina ny mpitandro filaminana sy ny sampana mpamonjy voina. Ireto farany no nampikatra ny razana avy eo. Mibontsina ny razana, nivoa-dra ny vavany sy ny orony ary tsy nahitana ratra ny vatany tety ivelany. Nisy paoketra mainty iray no teny am-bozonan’ilay vehivavy. « Finday sy vola no tany amin’io vehivavy hita faty io. Hita tao ny laharana findain’ny fianakaviany. Nantsoina an-telefaonina izy ireo. Fantatra tamin’izany fa avy any Antsirabe ity namoy ny ainy. Efa nolazaina ny havany hiakatra haka ny razana», hoy ny pôlisy iray nanao ny fizahana teny amin’ny Masay.
Nalaina tamin’ny fiara avy ao amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (BMH) ny razana ary naterina eny amin’ny
tranom-patin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na Hjra, eo am-piandrasana ny fianakaviany. Aorian’ny fizahana ny vatany (autopsie) no hahafantarana ny antony nahafaty an’ity vehivavy sy izay fotoana nahafatesany, mialoha ny nahitana ny razana tao anaty rano.
Voina goavana AMBANIN’AMPAMARINANA :: Mitantara ny fitrangan’ny fianjeran’ilay vatobe ireo lasibatra